ကြမ်းမှကြိုက်တဲ့မမ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on ကြမ်းမှကြိုက်တဲ့မမ
ကျွန်တော့ အဖေကအလုပ် ပြောင်းကျတော့ အရင်အိမ်ကိုရောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဒဂုံဘက်မှာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ဝယ်လိုက်တော့ အဲ့ဒီမှာနေရတယ် ။ ရန်ကုန်မှာက သိတဲ့အတိုင်းဘဲလေ ဘေးအခန်းမှာ ဘယ်သူနေမှန်းတောင် မသိကြဘူး ။ အဖေက အလုပ်နှင့် နယ်ကို ထွက်သလို ကျွန်တော်လည်း တက္ကသိုလ်တက်ရတယ် ။ တက္ကသိုလ်ကို ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းအသစ် သုံး ယောက် ရတယ် ။ ဖြူဖွေးလို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်ရယ် ပိုးဟပ်ဖြူရယ် နေမျိုးရယ် ။ ကျွန်တော်တို့လေးယောက်က စားသောက်နောက်ကြရင်းနှင့် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလို ခင်သွားကြတယ် ။ ဖြူဖွေးက အသားမည်းတယ်ဗျ ။ သူက ကုလားလေ သူ့အသားအရည်က မီးသွေးနုရောင်ဆိုတော့ သူ့ကို ချစ်စနိုးနှင့် ဖြူဖွေးခေါ်ကြတယ် ။ နောက်တစ်ယောက် ပိုးဟပ်ဖြူက တရုတ်ဗျ အသားတွေက စက္ကူလိုဖြူပြီး လမ်းလျောက်ရင် ဘယ်နေမှာထိုးလဲသွားမလဲထင်ရတဲ့လူနာလို အဲ့ကြောင့်သူ့ကို ပိုးဟပ်ဖြူလို့ခေါ်ကြတယ် ။
နေမျိုးကတော့ မျက်လုံးနှစ်လုံးက ဘယ်တစ်လုံးညာတစ်လုံး ဆိုတော့ သူကြည့်ရင် သုံးရာ့ခြောက်ဆယ် ကို မြင်တဲ့အတွက် နယ်ကအမျိုးတွေ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို မြင်နိုင်တယ်လို့ စနောက်ရာမှ နေမျိုးဖြစ်သွားတယ် ။ ဖြူဖွေးအမည်ကတော့ ထွန်းလင်းသူတဲ့ ဟားဟား တကယ်ကို ထွန်းလင်းတဲ့ အသားရောင်ကို ပိုင်ဆိုင်တယ်လေ ။ ပိုးဟပ်ဖြူအမည်က ရှောင်ရှင်းတဲ့ တရုတ်အမည် မြန်မာအမည်ကတော့ ထက်အောင်ပါ ။ နေမျိုးရဲ့အမည်ကတော့ နေမျိုးပါဘဲ ။ ကျွန်တော့ကို သူတို့က သရဲလေးဘဲ ခေါ်ကြတယ် ။ တက္ကသိုလ်မှာ တပတ်အတွင်းမှာ ခင်သွားပေမဲ့ ညီအကိုအရင်းတွေလိုဖြစ်သွားကြတယ် ။ ကျွန်တော့အိမ်မှာက လွတ်လပ်တော့ ပိုးဟပ်ဖြူ ယူလာတဲ့အော့ကားတွေကြည့် ပြီးရင် ဘယ်စော်ကို ဘယ်လိုလိုးလိုက်ရရင် ကောင်းမှာဆိုတဲ့ ကျောင်းကစော်တွေရဲ့အမည်တွေကိုရွက်ကာ ပြောပြီး ပျော်ပျော်နေကြတယ် ။
တနေ့တော့ ဖြူဖွေးက သူ့အမရဲ့မင်္ဂလောင်ရှိတယ် ပြောပြီး သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ် ။ ဖြူဖွေးတို့ကအရမ်း ချမ်းသာကြတယ် ။ သူအဖေမှာ ကုမဏ္ဏီနှစ်ခုတောင်ရှိတယ် ကျောင်းကိုလာရင်လည်း လက်ဆပ်ကြီးနှင့်ကိုလာတာ ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့အထဲမှာ အဆင်းရဲဆုံးမိသားစုလို့ ပြောလို့ရတယ် ။ ဇတ်လမ်းတောင် ပျက်သွားသလား မသိဘူး ကဲ့ပြန်စမယ်ဗျာ ။ ဖြူဖွေးရဲ့အိမ်ကို ရောက်သွားတော့ သူတို့အိမ်ရှေ့က ခြံကွက်လပ်ကြီးထဲမှာ စားပွဲခုံတွေစီရံပြီးတော့ ချထားတယ် ။အိမ်ကလည်း နန်တော်အလားဘဲဗျာ နည်းတာကြီးမဟုတ် အခန်း ခြောက် ခန်းအထိရှိတယ် ။ နှစ်ထပ် လုံးချင်းတိုက်ကြီးလေ ။ သူ့ရဲ့အမနှင့် သူ့ယောက်ဖလောင်းကို မိတ်ဆက်ပေး ပြီးမှ သူ့အမေကို မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။ သူ့အမေက ကုလားဆက်လေးနှင့် အသားကို ဖွေးကာဝင်းနေတာပါ ။ သူနှင့်က လားလားမှမတူဘူး ။ မိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာ အန်တီသီတာ ကနေပြီး သူ့ကို ဖြူဖွေးက ကျွန်တော်တို့တွေအကြောင်းကို ပြောပြထားကြောင်းပြောလာတယ် ။
ကျွန်တော်တို့က အငြိမ်မနေဘဲ ကူညီကာ လုပ်ကိုပေးတော့ သူတို့မိသားစုတွေက အရမ်းခင်သွားကြတယ် ။ ပိုးဟပ်ဖြူ အဖေကိုတွေ့လိုက်မှ အဖေတူသားဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ဗျ ။ မီးသွေးခဲရဲ့ အနုရောင်နှင့်အရင်ကြားထဲက လူကြီဗျ ။ သူ့အမည်က ထွနးတောက်တဲ့ ဟားဟား တကယ်ကိုမီးထွန်းရင် အနက်ရောင်လဲ့ပြီး တောက်မဲ့သူလေ ဟား..ဟား.. သူတို့အမမင်္ဂဆောင်မှာ ကူညီရင်းနှင်း အထွက်အဝင်တိုင်းမှာ အန်တီသီတာနှင့် ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ နေရာလုရတာ ကြုံတယ် ။ တံခါးတစ်ခုမှာလူနှစ်ယောက် ပွတ်တိုက်သလိုဘဲ စားပွဲတွေယူပြီးထွက်လာရင် နှစ်ယောက်တူတော့ တစ်ခါတရံ တတောင်ဆစ်က အန်တီသီတာရဲ့ ပျောအိနေတဲ့နို့ကိုသွားတိုက်မိတယ် ။ စားဖူးတော့အရသာသိနေတော့လည်း သူရဲ့အနောက်ကနေ ဟင်းပွဲတွေလိုက်ပေးသလိုနှင့် ဘော်ဒီကို လှမ်းချိုးကြည့်တယ် ။ ဗိုက်ခေါက် နည်းနည်းထွက်ရုံကလွှဲလို့ နို့ရောဖင်ရော ပြောစရာကို မရှိတာဗျာ ။
အတွင်းခံဘောင်းဘီက အကောင်းစားမို့ တော်တန်ရုံဘောင်ဘီဆိုရင် ပြဲကာ လီးကငေါ့ထွက်နေမှာ အသေချာဘဲ ။ သူ့အမလည်း အရမ်းချောတော့ စိတ်နှင့်ကို သမီးရောအမေရော ပြစ်မှားနေမိတယ် ။အဲ့လိုနှင့် မင်္ဂလာပွဲလာ သမိးစောင့်အကြိုက ပြီးသွားတယ် ။ လူက ရင်နီးတဲ့အိမ်နားတွေမို့ စားပွဲဝိုင်းက ခွန်နှစ် ဝိုင်းလောက်သာရှိတာကို ဖြူဖွေးက ဒါဘော် ဘလက် အရက်တစ်လုံးယူလာပြီး စားပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင်ကာ လူလေးယောက်ကစ်ကြတယ် ။ အမအလိုးခံရမှာကို အတော့ပျော်နေတဲ့ ဖြူဖွေးက အများကစ်ကာ အရင်ဆုံးမူးသွားတယ် ။ ပိုဟပ်ဖြူက လူသာပိန်ပိန်နှင့်ရေဂါသည် အရက်ကျတော့ ရေမရောဘူး ကစ်လိုက်တာဘဲ ။ နေမျိုး က သိပ်မသောက်နိုင်တော့ သူလည်းမူးသွားတယ် ။ ဖြူဖွေးအမ ရွှေစင်ကအရက်နောက်တစ်လုံးပေးလာတော့ အေးဆေးဘဲ ရေခဲရောကာ ကျွန်တော်သောက်ပေမဲ့ ရေမရောဘဲ ပလိန်းကစ်တဲ့ ပိုးဟပ်ဖြူလည်း မှောက်သွားတယ် ။
သူက အကောင်းစားတွေသောက်လာတာလေ ….. ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို့မြို့မှာနေတုန်း ချက်အရက် အဦးရည်သောက်လာတာမို့ ဒါတွေ အေးဆေးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ် ။ ချက်အရက်က မီးခြစ်လေးနှင့်တိုက်ရင်တောင် မီထလောင်တာကိုဗျ ။ တရုတ်တွေက သိုင်းကားတွေ မှာ ဝါးရွက်စိမ်းအရက် အကောင်းဆုံးပြောတာကို သဘောကျပြီး ကျွန်တော်က ချက်အရက်ကို ဝရဇိန်လို့ပေးထားတယ် ။ အရက်ဠီကာဖွင့် သလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ ။ ပထမဦးဆုံး ဖြူဖွေးနှင့်နေမျိုးကို အခန်းထဲကိုပို့ပြီး ဆက်သောက်နေကြတော့ ပိုဟပ်ဖြူမူးတော့ ပိုးဟပ်ဖြူကိုတွယ် နေမျိုးရဲ့အခန်းကို ပို့ပေးကာ ဖြူဖွေးအခန်းမှာဘဲ ဝင်အိပ်လိုက်တယ် ။ တရေးနိုးပြီး ရေအဝသောက်ကာ သေးသွားပေါက်တယ် ။ ပြန်ပြီး ထွက်လာတော့ အန်တီသီတာနှင့်ဆုံတယ် လူကလည်း အရက်ရှိန်နှင့်ရီတီတီဖြစ်နေတာ အန်တီသီတာရဲ့ ညဝတ်အိပ်တဲ့ဂါဝန်ကလည်း ပါးပါးလေးဆိုတော့ ဘာအတွင်းခံမှ ဝတ်မထားတဲ့သူ့ရဲ့အလှကို အတိုင်းသားမြင်နေရတယ် ။
သူက အိမ်သာခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ် ဂျက်လည်းချသံမကြားလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း အိမ်သာထဲကိုဝင်လိုက်တယ် ။ ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာက တွဲရက်မို့ ဒေါင့်လေးကပ်ကာ သူသေးပေါက်တာကို စောင့်နေလိုက်တယ် ။ တရှဲရှဲနှင့် သူလည်း အတော်ကိုသေးပေါက်ချင်လို့ ဆင်းလာပုံဘဲ ။ သူရေးဆေးပြီး အပြင်ထွက်တော့ သူ့ကိုဆွဲကာ နံရံမှာကပ်ပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက်တယ် ။ ပထမတော့သူက ရုန်းကန် ပေမဲ့လည်း လျှာချင်းထိတွေ့ကာ ကစားပးလိုက်တော့ သူ့လက်ကငြိမ်သွားတယ် ။ အကူညီလုပ်ပေးတုန်းက မတော်တဆပွတ်တိုက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အခုတော့ အဝတ်နှစ်လွာခြားကာ ဖိကပ်ပြီး ပွတ်တိုက်ပေးထားတယ် ။ကျွန်တော်လည်း အချိန်သိပ်မဆွဲဘဲ ဇေ့ကို ဖြုတ်ကာ လီးကိုထုတ်လိုက်တယ် ။ သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို ဖိကာ နမ်းရင်းနှင့်ဆောင့်သွင်းပေးလိုက်တယ် ။ စီပြီးတင်းကျပ်နေတယ် ဒါတောင်မှ အရည်တွေစိမ့်ထွက်နေလို့သာပေါ့ ။
သူ့ရဲ့လက်တွောက ကျော့ပေါ်မှာ ဓတ်လိုက်တဲ့သူလို ပွတ်သပ်ကာ ပေးလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို အော်မှာစိုးတာကြောင့် နံရံမှာကပ်ပြီး မတ်တပ်ကိုဆော်ထည့်လိုက်တယ် ။ သူက အနမ်းကိုရပ်ပြီး “” မောင်..မမမောတ်ာကွယ် “” လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း အရမ်းပျော်သွားတယ် ။ သူ့ကို ရေချိုးခန်းရဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လှဲချကာ ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြစ်လိုက်ကာ လီးကိုသူ့စောက်ဖောင်းကြီးထဲကို ထိုးထည့်လိုက်တော့တယ် ။ “” အား..မောင်ရယ် “” လို့ ညီးသံလေး ထွက်လာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေ သူ့ကိုနမ်းရင်းနှင့်မြန်မြန်ဘဲ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကနေ ညစ်ညစ်ပေးပြီးတော့ ကျွန်တော့ကျော့ကို လက်သည်းနှင့်ကုပ်ကာ ပြီးသွာတယ် ။ “” အား..မောင်ရယ် “” လို့ ညီးပြီးငြိမ်သွားတယ် ။ သူ့ကို ဆက်လက်ပြီး အခက် လေးဆယ် ခန့်ဆောင့်လုပ်ပြီး သုတ်ရည်တွေ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ပန်းကာ ကျွန်တော်လည်း ပြီးသွားတယ် ။
နှစ်ယောက်လုံးအမောပြေတော့မှ အဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ်လိုက်ကြတယ် ။ အန်တီသီတာက ကျွန်တော့ရဲ့ပါးနှင့် နုတ်ခမ်းကိုနမ်ပြီး သူက “” လူကို ဘယ်အချိန်ကတည်း ဒီလိုလုပ်ချောင်းနေတာလဲ မသိဘူး လူဆိုးလေး “” လို့ ပြောကာ သူ့အခန်းကို ပြန်သွားတယ် ။ ကျွန်တော် အခန်းပြန်လာတော့ ဖြူဖွေးက ပုဆိုးကလည်ပင်ပေါ်ရောက်နေပြီး လီးမဲမဲက ပေါ်နေတယ် ။ အဲ့ကောင်လီက ကျွန်တော့ထက် နှစ် လက်မ လောက်တိုမှာကို သိလိုက်တယ် ။ တရှူးရှူးနှင့် အိပ်ပျော်နေတဲ့ သူဘေးကဆင်းကာ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာဘဲ အိပ်လိုက်တော့တယ် ။ မနက် စောစော နိုးလာပြီး အဝတိအစားတွေလှဲကာ မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ဟော်တယ်ကို သွားလိုက်ုကတယ် ။ အန်တီသီတာကတော့ တစ်ခါတစ်ခါ သူ့ယောက်ျားရဲ့အလစ်မှာ မျက်လုံးနှိပ်ပြလိုက်သေးတယ် ။ ပွဲပြီးသွားတော့ အန်တီသီတာက ကျွန်တော့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို တောင်းတယ် ။ သူက “” ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် မောင် “” လို့ နားမှာကပ်ကာ တိုးတိုးလေး ပြောသွားတယ် ။
သူ့ရဲ့နောက်နေ သူ့ရဲ့ဖင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဟင်း နောက်တစ်ခါဆိုရင် အဲ့ဖင်ကြီးကို မလှုပ်နိုင်အောင်ကို လိုးပြစ်လိုက်မယ် တွေးကာ ကြည့်နေလိုက်တယ် ။ ဖြူဖွေးအမ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နှစ် ရက်အကြာမှာ အန်တီသီတာက ဖုန်းဆက်လာတယ် ။ သူက ဟော်တယ်ကို မသွားချင်ဘူးလို့ ပြောတော့ ကျွန်တော့ရဲ့အိမ်လိပ်စာကို ပေးကာ ချိန်းထားလိုက်တယ် ။ ကံကောင်းတယ်ဗျ အန်တီသီတာ ဖုန်းဆက်တော့ ဘေးမှာ သူ့သားဖြူဖွေးက ရှိနေတယ်လေ ။ ခဏ္ဏကွာ အဖေနှင့်ငါ ဖုန်းပြောအုံးမယ် လို့ ပြောကာ အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာရောက်မှဘဲ အိမ်ကို ချိန်းလိုက်တယ် ။ သူတို့ဆီ ပြန်သွားတော့ ဖြူဖွေးက သူ့စော်နှင့်ချိန်းကာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ခေါ်တော့ မလိုက်တော့ဘူး အဖေခိုင်းတာလုပ်စရာရှိတယ်လို့ ညာကာ အိမ်ကို တန်းပြန်ခဲ့တယ် ။ အိမ်ကိုရောက်တော့ ခဏ္ဏအနားယူပြီး ရေချိုးကာ လီးကို ဆပ်ပြာနှင့်တိုက်ကာ မျက်နှာသုတ်ပဝါပတ်ပြီး ထွက်လာတော့ အိမ်ရှေ့က ဘဲလ်တီးသံကြားတယ် ။
တံခါးထဖွင့်တော့ အန်တီသီတာဖြစ်နေတော့ သူ့ကို တစ်ခါတည်း အိပ်ခန်းကို ခေါ်သွားတယ် ။ အခန်းကိုရောက်တာနှင့် သူ့ရဲ့အနက်ထမိန်နှင့်အပြာရောင်အင်္ကျီကို ချွတ်ချလိုက်လိုက်တယ်လ။ သူရဲ့ဘောလီကိုချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်ကို ကုတင်ပေါ်ဖြာ်းဖြည်းလေးချပေးလိုက်တယ် ။ ပြီးမှဘဲ သူ့ရဲ့အနက်ရောင်ဇာပင်တီကို ချွတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖောင်းကြွကာထပြီးခုန်တော့မဲ့ အတိုင်းဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုနမ်းပေးလိုက်တယ် ။ သူက အလိုးခံရမှာမို့ ကြိုပြီးတော့ စောက်ဖုတ်မှာ ရေမွေးစွတ်ခဲ့ပုံဘဲ မွေးရနံ သင်းထုံနေတယ် ။ စောက်ဖုတ်နှခမ်းနှစ်ခုကို လက်နှင့်ဖြဲပြီး လျာဖျားလေးကို အတွင်းသားတွေကို အပေါ်အောက်ယက်ပေးလိုက်တယ် ။ သူက “” အား..ရှီး..မောင်ရယ်..”” လို့ ညီးသံလေးထွက်လာပြီးတော့ ဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ပေးလာတယ် ။ သူ့ကိုယက်ပေးသလိုဘဲ ကျွန်တော်က လီးကိုဂွင်းတိုက်ထားတယ် ။ လီးက မာပြီးတောင့်လာတော့ သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းပိုနမ်းပြီး။
လီးကို သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီး အထဲကို အဆုံးထိဖြည်းဖြည်းချင့် ဆောင့်သွင်းလိုက်တယ် ။ “” အား..မောင်ရယ်..ပြည့်သိပ်နေတာဘဲကွယ် “” လို့ ညီးလာတယ် ။ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကနေ အရည်တွေလိုက်လာတော့ သူ့ကို မြန်မြန်ဘဲ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူကလည်း အောက်နုတ်ခမ်းကိုသွား နှင့်ကိုက်ကာ တင်းခံတယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကိုရဲ့အရှေ့အနောက်ပြေးလွာနေတဲ့နို့ကြီးတွေကို ကြည့်နေရာမှ လက်နှင့်ဆွဲကာ နသိုးကြိုးပြတ်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ “” အား..ရှီး…မောင်ရယ်..ကောင်းလိုက်တာကွာ..အား..ရှီး မြန်မြန်..မမပြီးတော့မယ် “” လို့ ပြောလာတော့ အရှိန်မလျောတော့ဘဲ ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လုပ်ကာ သုတ်ရည်တွေကို သူ့ရဲ့အထဲမှာပန်းပြီး ပြီးသွားတယ် ။သူ့အပေါ်ကို မှောက်ချကာ အမောဖြေကာ မှိန်းနေလိုက်တယ် ။ သူက လှိုက်မောသံလေးနှင့် တင်းတင်းဖက်ကာ “” အရမ်းချစ်တယ် မောင်ရယ် “” လို့ ပြောလာတယ် ။
ကျွန်တော်ကလည်း “” အရမ်းချစ်တယ် အန်တီရယ် “” လို့ နုတ်ကနေ ထွက်သွားတော့ သူက “” လူကို ဖွတ်ဖွတ်ကြေပြီ စောက်ဖုတ်ပြဲအောင် ကြမ်းကြမ်းလိုးပြီးမှ အန်တီလား မောင်ရယ် မမလို့ဘဲ ပြောင်းခေါ်ပါကွယ် “” လို့ ပြောလာတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ လို့ ပြန်ပြီးပြောင်းကာ ခေါ်လိုက်တယ် ။ သူ့အပေါ်ကနေ မှိန်းနေတာ အမောပြေတော့ ဘေးကိုလိမ့်ဆင်းကာ ပက်လက်ကလေး နေလိုက်တယ် ။ အန်တီသီတာရဲ့လက်တွေက ကျွန်တော့ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ပွတ်သပ်ကာ ကစားပေးနေတုန်းမှာ သူက “” မောင်က မမကို သမီးလေးပွဲမတိုင်ခင်ညက ချစ်ပေးတာ အရမ်းကြမ်းတာဘဲကွယ် မမလေ အဖုတ်တွေတောင် ကျဉ်စပ်နေတာဘဲ “” ပြောတော့ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ဘက်ကို လှည့်ကာ ပါးကိုနမ်းလိုက်ပြီးမှ “” မမက အဲ့ညက ကြမ်းချင်စရာကြီးကို လှနေတာလို့ ပြန်ကာပြောလိုက်တယ် သူက နှာခေါင်းကို မနာအောင်ဆွဲ နဖူးကိုလက်နှင့်ခပ်ဖွဖွထုကာ “”။
မမလေ အဲ့ဒီညက တစ်ကြိမ်တည်း အလုပ်ခံရတာနှင့်ကို မောင့်ချစ်သွားတယ် သိလား မောင် “” လို့ သူက ပြောလာတော့ ပြုံးကာ “” မသိပါဘူး “” လို့ ပြောလိုက်တော့ “” သွား လူဆိုးလေး “” လို့ ပြောကာ အိပ်ရာကနေ ထသွားတယ် ။ သူရဲ့နောက်ကနေ ထကာလိုက်သွားပြီး အယ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဖင်ကြားမှာ ညီလေးကိုညှပ်တော့ “” မောင်အရည်တွေကို လက်နှင့်ခံပြီး ရေချိုးခန်း သွားနေတာကွ အရည်တွေကြမ်းပြင် ကျကုန်လိမ့်မယ် “” လို့ပြောကာ နောက်ပြန်ကိုယ်နှင့်ခါကာ ရေချိုးခန်းကို ပြေးကာဝင်သွားတယ် ။ သူ ပြေးသွားတော့ တုံခါနေတဲ့ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး လီးကထပ်တောင်လာတယ် ။ သူ့နောက်ကနေလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းကို ဝင်လိုက်တယ် ။ သူက သူရဲ့အဖုတ်ကို ဆပ်ပြာနှင့်ဆေးနေတုန်းမှာ သူ့ကိုလှမ်းပြီး ဖက်လိုက်တယ် ။ “” ဒီမှာဆေးလို့ မပြီးသေးဘူး မောင် ခဏ္ဏစောင့် “” လို့ပြောပြီး သူရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုရော အမွေးတွေကိုရော ဆေးကြောတယ် ။
သူဆေးပြီးမှ ကျွန်တော့ရဲ့ အရည်တွေပေနေတဲ့ လီးကိုသူ့လက်နှင့်ကိုင်ပြီး ဆေးကြောပေးတယ် ။ ကျွန်တော်က သူ့ကို “” မမ မောင့်လီးကို စုတ်ပေးပါလား “” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူက ခေါင်းညှိတ်ကာ လီးကိုလှမ်း ကိုင်ကာ စုတ်ပေးတယ် ။ လျာဖျားလေးက လီးထိပ်ကအကွဲကြောင်းလေးကို ထိုးသွင်းပြီး ဒစ်ဖျားကိုနုတ်ခမ်းနှင့်ဖိဖိကာစုတ်ပေးတယ် ။ “” အား..ကောင်လိုက်တာ မမရယ် “” လို့ ညီးယူရတဲ့အထိကို အရသာကောင်းတယ် ။ ကျွန်တော်ညီးတော့ သူက ပိုပြီးဖိကာစုတ်ပေးတယ် ။ “” အား.မမ ရပ်တော့ “” လို့ သူ့ကိုတားယူလိုက်ရတယ် ။ သူ့ကို ဆွဲထူကာ နံရံမှာကပ်စေပြီး သူ့အရှေ့မှာ ဒူးထောက်ကာ အရှေ့ကို မို့ပြီးဖောင်းနေတဲ့စောက်ဖုတ်ကို လျာဖျားလေးနှင့်ကလော်ပေးလိုက်တယ် ။ “အိုး..မောင်ရယ်..” လို့ ညီးသံလေးထွက်လာတယ် ။ ဆေးကြောထားလို့ ဆပ်ပြာရနံက သူ့ရဲ့အဖုတ်ကို မွေးနေစေတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့အရည်တွေစိုလာတော့မှ ထရပ်ကာ လီကိုကိုင်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဆောင့် သွင်းလိုက်တယ် ။
“အား..ရှီး..မောင်ရယ်. “” လို့ ညီးကာ လက်နှစ်ဘက်က လည်ပင်းမှာ တွဲခိုကာ ခေါင်းကိုပခုံးမှာ တင်လာတယ် ။ ခြေတစ်ဘက်ကို ဘေးနံရံမှာကန်ထားစေပြီး သူ့ကိုဖိကပ်ကာ ကြမ်းကြမ်းဘဲဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ “” အား..ရှီး..မောင်ရယ် “” လို့ ညီးရင်းပိုပြီးတင်းတင်းလေးဖက်လာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကတင်းတင်းဖက်လေ မြန်မြန်ဆောင့်လေ ဆောင့်လလုပ်ပေးတယ် ။ သူက “” အား..ရှီး..မောင်ရယ်… မမ.. ပြီးချင်လာပြန်ပြီကွယ်.. အား..မောင်ရယ်.. မြန်မြန်ဆောင့်ပေးပါ..အား..မောင်ရယ်.. မြန်မြန် “” လို့ ညီးရင်းနှင့် တင်းတင်းဖက်ထားတဲ့သူ့လက်တွေက ခါးကိုကိုင်ကာ လက်သည်းတွေနှင့်ညှစ်ရင်း သူပြီးသွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို နောက်ထပ် အချက် နှစ်ဆယ် ဆောင့်လုပ်ကာ ပြီးသွားတယ် ။ နံရံမှာကပ်ပြီး အလုပ်ခံရတဲ့သူ့ရဲ့ ဒူးတွေက ပျောခွေလာတော့ သူ့ကိုထိန်းကာ ရေချိုးကြမ်းပြင်မှာ နှစ်ယောက်သား လှဲကာ နေလိုက်ကြတယ် ။
အမောပြေတော့မှ သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်ကို ကျွန်တော်ကဆေးပေးလိုက်တယ် ။ နေမထိတဲ့သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးက အကွဲကြောင်းတစ်ဝှိက်မှာ နီရဲနေတယ် ။ သူက “” အဲ့ဒါ မောင့်ကြောင့် မောင်က ကြမ်းကြမ်းလုပ်လို့ အဲ့လိုဖြစ်တာ “” လို့ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကို “” မောင်က ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပေးရတာ မမက ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပေးတာ ကြိုက်တယ် ဆိုလို့ပေါ့ “” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ သူက ကိုယ်လက်မျက်နှာသစ်ပြီး အိပ်ခန်းကို ဝင်သွားတယ် ။ ကျွန်တော်က ရေချိုးပြီး ထွက်လာတော့ သူက သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ပြန်ဝတ်ပြီး ကျွန်တော့ပါးကိုနမ်းကာ အိမ်ပြန်သွားတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ညနေစာချက်ပြုတ်ကာ စားသောက်ကာ တချိုးတည်းအိပ်လိုက်လေတော့သည် …..ပြီးပါပြီ။
“ဝင့်ဝါ..ဒီမှာ ဧည့်သည်တွေကို လာဧည့်ခံပါအုံး” “ဟုတ်ကဲ့ လာပါပီ ကိုကို” ဝင့်ဝါသည် အရမ်းလှပပီး မြင်သူတိုင်းငေးရအောင် ခန္ဓာကိုယ် ပြေပြစ်ပီး ပြောစရာမလိုအောင် ချောမောသူဖစ်သည် သို့ပေမယ့် လင်ရှိမယားဖြစ်၍ ပြစ်မှားချင်ပါသော်လည်း ကိုကို့ သူငယ်ချင်းများမှာ သူတို့သူငယ်ချင်းမိန်းမ ဖြစ်နေလို့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပီး အထန်စိတ်မဖြစ်အောင် နေကြရသည်။ ဝင့်ဝါသည် ကိုကို့ ကို အရမ်းချစ်ပါသောကြောင့် ကိုကို ဖြစ်စေချင်ရင် ကျွန်ပါအဖြစ်ခံပီး နေပေးသည်။ ခိုင်းသမျှကိုလည်း မငြီးငြူပဲ တစိုက်မက်မက် လုပ်ပေးတတ် ကိုကိုအလုပ်ကနေပင်ပင်းလာပီဆိုရင်လည်း ပြုစုပေးတတ်လို့ ကိုကိုကလည်း အရမ်းချစ်နေရသည်။ သို့သော် ဝင့်ဝါ၏ ကာမ ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ပါ ကိုကိုမှာ နေ့တိုင်း အလုပ်တွေနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရပီး ပြန်လာရင် ပင်ပန်းပီး တန်းအိပ်နေလို့ ဝင့်ဝါမှာ ဆာနေပါသော်လည်း အာသာဖြေပီးသာ နေခဲ့ရတာ သုံးနှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါပီ။ […]
`ခွေးတွေ.. ရှင်တို့ … ခွေးတွေသိလား´ `အငုံ´ ငယ်သံပါအောင်ကြုံးအော်ပြစ်လိုက်သော အသံလေးက တိုက်ကြီးအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲသလို မြည်ဟီးသွားလေသည်။ အငုံမေမေ၊ ပွင့်က ခပ်ဝေးဝေးရောက်နေသော ထမီကို ကယောင်ကတမ်းဆွဲယူပြီး ခြေမှစွပ်ဝတ်ခါ၊ ပြေကျနေသော ဆံပင်ကို ကပိုကရို ထုံးဖွဲ့သည်။ နို့နှစ်လုံးအပေါ်သို့ အလိပ်လိုက်လေးတက်နေသော ဘရာစီယာကို အတင်းဆွဲချပြီး အုံကြီးထွားကြိုင်းသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဖုံးဖီကာကွယ်သည်။ ဦးဦးသံဒိုင်က ပုဆိုးကို ကောက်ဝတ်ပြီး တံခါးဝသို့ သုတ်ခြေတင်ရန်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သည်။ `လူယုတ်မာကြီး.. ရှင်ပြသနာတတ်သွားချင်လား. ထိုင်စမ်း.. ဘယ်မှမသွားနဲ့´ ခြောက်ပေးနီးပါးထွားကြိုင်းသော ကိုသံဒိုင်က (၁၆)နှစ်သမီးလေးအငုံ၏ အဆိုကို လေးစာရိုကျိုးစွာ လိုကနာရှာသည်။ `အကုန်.. စောက်ရှက်ကွဲကုန်မယ်´ အငုံက နာဇီဟစ်တလာမျက်နှာဖြင့် ဟိန်းဟောက်သည်။ ပွင့်က ရှက်လွန်း၍ မျက်နှာကို လက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ခါ တရှုံရှုံငိုနေရှာသည်။ `ကြည့်ပါအုံးရှင်.. ဒါ.. ဧည့်ခန်းရှင့်.. […]
သမီးနာမည်က သီရိ။ အသက်က ၁၄ နှစ်။ ၉ တန်းတက် နေတယ်လေ။ ၁၄နှစ်သမီးပေမယ့် လျှော့မတွက်နဲ့နော်။ ရည်းစား ၃ ယောက်တောင်ထားဖူးတယ်။ သမီးရဲ့ နောက်ဆုံးရည်းစားက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလေ။ သူ့နာမည်က ရာဇာတဲ့။ သူ့အဖေ ရာထူးတက်ပြီး နယ်ပြောင်းသွားလို့ ကွဲသွားကြတာ။ အခု သူတို့ မိသားစုက သမီးတို့လမ်းထဲ ပြန်ပြောင်းလာကြပြီး သူနဲ့သမီး ငြိသွားတာ။ ၉ တန်း တက်တော့လည်းတစ်တန်းထဲ၊ ကျှူရှင်တွေလည်း အတူအတူပဲ။ တစ်ခြား သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်နဲ့အတူ သမီးအိမ်မှာ ၀ိုင်း ကျူရှင်ယူကြတယ်။ တစ်နေ့ သူက သူ့အမျိုး တစ်ဦးရဲ့ နာရေးရှိလို့ သွားတော့ မနက်ပိုင်း ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူး။ သမီးတို့က သင်္ချာကျူရှင်ကို အတန်းပိုင်ဆရာမဆီမှာယူတယ်။ ရာဇာ ကျောင်း မတက်နိုင်တဲ့နေ့ကကျောင်းဆင်း […]